Uto maka mmemme iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa | ECommerce ozi ọma
Uto maka mmemme iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
Susana Maria Urbano Mateos | | Ahịa ahịa
Ndị otu na mmemme iguzosi ike n'ihe mụbara pasent 15 n'afọ a rue ngụkọta nke ijeri 3.8, dị ka ebipụtara na nso nso a "Akuko Mkpako Nke Nguzosi Ike n'Ihe Nke 2017".
Uto a mere na 2015Mgbe ndi otu ruru 3.3 ijeri ndị otu, ọ bụ uto 26 percent. O kwuru na uto agbadatala na United States makana ọ bụ ahịa na-eto eto. Melissa freund, onye edemede nke akụkọ bipụtara.
Nnweta na ngalaba nri na-eto n'ike, tumadi n'ihi mkpali ego. Ọnụ ọgụgụ ndị otu a dị nde 664 ugbu a ma e jiri ya tụnyere nde 578 na 2015.
Ulo ahia, Site na ndị otu ijeri 1.6 na mmemme ụgwọ ọrụ, ana m achịkwa mpaghara ahụ. Ndị njem na ile ọbịa nabatara ndị otu ijeri 1.1. Otu n'ime ngalaba kachasị ike bụ mpaghara ọzọ na-apụta, kpuchie na azụmahịa naanị n'ịntanetị, ntụrụndụ, azụmahịa kwa ụbọchị, mkpokọta isi, na azụmahịa metụtara kaadị. Site na ndị otu 462 nde, mpaghara a bụ pasent 12 nke ngụkọta ndị otu n'ahịa, dị ka akụkọ ahụ si kwuo.
Mmetụta bụ otu n'ime ihe kachasị mkpa n'akụkụ otu niile nke ọnụ ọgụgụ ndị nọchitere anya ya, yana ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe na-ahọrọkarị "Ahụrụ m ika / ndị na-ere ahịa / ọrụ ahụ n'anya" dị ka gị isi ihe mere isonye.
Nchoputa ndi ozo bu:
Pasent 53 nke ndị na-azụ ahịa gosipụtara ịdị mfe nke ojiji dị ka isi ihe kpatara isonye na mmemme a.
Pasent 39 hotara nnukwu ego dị ka ihe kpatara ha.
Pasent 37 zoro aka na usoro ihe omume ahụ dị mfe nghọta.
Pasent 57 kwuru na ha hapụrụ mmemme ahụ maka na o were ogologo oge inweta akara.
Pasent 51 kwuru na ha tụkwasịrị obi na mmemme a na ozi nkeonwe ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahịa » Uto maka mmemme iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa
Kedu otu esi ahọrọ isiokwu zuru oke maka ụlọ ahịa Shopify gị?
Maka ire, ekwentị dị mma karịa email